Ngo-2010 i-Kawasaki Z1000 Ukuhlaziywa kweeSithuthuthu
I-Kawasaki inikeza i-literbike yabo ehamba ngee-makeover
Ubuninzi bezinto ezinokuba ngumntu onokubakho kungenza into ephosakeleyo kwisithuthuthu sehlabathi. Nangona yayingenanto yokubukeka kwintlonelo, i-Kawasaki Z1000 ephumayo yayilumko olungazange lube lukhuni njengegxolo layo.
Abanjiniyela be-Kawasaki babengenakunqanda ukukhupha phakathi kokubonakala kunye nokusebenza, ngoko ke xa bahlaziya i-Z1000 ngo-2010 baya kwinqwelo ehamba phambili, i-fiercer bike eyayingekho nje ngokukhawuleza kumgca ochanekileyo, kodwa i-nimbler ekutshintsheni kwaye ingcono ekumisekeni.
Siyakwamkelwa kwinto entsha, ka-2010 ka-Kawasaki Z1000 (intengo kwi-$ 10,499), enye ye-7 ka-2010 ngo-Kawasakis.
IIMBONO: 22 ii-lbs, i-13 ngaphezulu i-horse power, phantse i-100% yonke entsha
Uluhlu olude lwezinto lubhekiswe kwiinguqu Z1000. Ukufaka isakhelo sendala endala ngenjongo yokwakheka kwe-aluminium, i-chassis entsha kunye ne-subframe yenza ukuba u-30% owongezelelekileyo uxinzelelo lwe-torsional, ukulinganisela okuthe xaxa, ukuphakama kwesitulo esisezantsi (kuye kwafika kuma-inch 32.1), kunye ne-8.8 lbs yokulondoloza ubunzima. Ukulahlekelwa kwesisindo semali engama-22 lbs, ukuzisa umthamo wokuloba kuma-481 lbs.
Ukuhlaziywa kwakhona yi-Showa 41mm imfoloko, ngoku i-compress adjustable. Ukumiswa kokumva kwakhona kuhlaziywa, kunye nokutshitshiswa kwe-link-back link.
Injini, eyenziwa njengelungu eligxininisiweyo kwaye ngoku idibanisa isakhelo kwimiba emine (ngokubhekiselele kwintathu edlulileyo), iphinde isebenze ngokuphawulekayo. Ukufuduswa kwempahla kwagqitywa ukusuka ku-953cc ukuya ku-1,043cc, kunye ne-balancer yesibili yongezwa ngokukhawuleza, nto leyo eyenza i-chassis enamandla.
Inkqubo entsha yokukhupha iquka iincinci ezincinci kunye nobuninzi bobukhulu (okwenzekayo ukwenza uluhlu lwethu lwee -10 eziPhezulu ezidumileyo .) I-Grunt iye yaxhaswa ukusuka kuma-125 ukuya kuma-horse (kwi-9,600 rpm), kwaye i-torque iphucuke ukusuka kwi-72.7 lb- ft ukuya kuma-81.1 lb-ft (kwi-7,800 rpm.) Ukuthelekisa, i-Z1000 ivelisa inani elifanayo le-torque njenge-ZX-10R, kwi-injini ye-injini engama-900.
Amandla okumisa avela nge-4-piston ye-ZX-10R, i-discal ye-300mm ye-bharal disc ngaphambili, kunye nokusekwa kwangaphambili kwe-piston 250mm eye yahlulwa phantsi ukuze ibonakalise bhetele i-aluminium esitsha, isondo elivulekileyo elixutywe kwi-Dunlop enobudlova. I-Rubber Sportmax D210 / D210F.
I-Kawasaki Z1000 ifumaneka ngemibala emibili: i-Metallic Spark Black (kunye nesilivere) okanye i-Pearl Stardust White (nge-orange).
UKUFUNA UMSEBENZI WONKE: Imivalo echanekileyo, ikhutshwe emuva
Nangona i-shrinkage ye-dimensional, i-Kawasaki Z1000 isabheki enkulu. Ngaphandle kokuba unomlenze omde, ukuphakama kwesihlalo esingama-32.1 kwinto enokuyenza ibe yinto enzima ukunyuka kweenyawo (phawula i-ines toes posture kule fotyi; ine-inseam engu-31 intshi.)
Umbono wekhenpta ubonisa ngokukodwa ukuba akukho ukhuseleko lomzimba ophezulu, kunye neqela elincinci elincinci elincinci elikwazi ukufaka izikhundla ezintathu ngaphandle kwesixhobo. Ijijithali epheleleyo yedijithali ifaka i-speedometer, i-tachometer yesitayela sebha, i-odometer, iimitha zokuhamba ezimbini, iwashi, kunye ne-gauge ye-fuel.
Amacandbars aphakanyisiweyo anika ithuba lokuzithoba, nangona ii-peg ze Z1000 zikhawuleza emva koko, zongeza into yezemidlalo kwi-ergonomics engenekayo. Isikhwama, nangona sinyanzele kwaye sisinyanisekile, sisenokuba sikhululekile.
KWENDLELA: Ulungelelwano olwaneleyo?
Ngobusuku phambi kohambo lwethu lwe-Z1000, i-Kawasaki reps iphinda ithi kwakhona i-literbike yabo ehamba ngeyona nto iguquke kakhulu. Mhlawumbi ngenxa yokuba ndiyathemba (okanye ukuthambekela okuqhubekayo kwabantu be-PR ukuthetha iingongoma ezide), andizange ndikholelwe ukuba le myingxube wenziwe ngolu hlobo yayinxeba njengento ebonakalayo.
Ngomso waseMgqibelo ekuseni, sahamba esivela kwidolophu encinane yaseCambria, eCalifornia kwinqanaba lemizila eminyeneyo eqhotyoshelweyo eyayinamaqabunga amanzi kwaye yahlakazeka ngamagundane kunye neendawo eziqhaqhaqhako-kungeyona imeko ephumayo kakhulu, kodwa indlela enkulu yokuvavanya ukumiswa kweZ1000 kunye ne-chassis. Icandelo lokuqala lalingumngeni, ngakumbi ngenxa yendlela yokuhamba ngayo ibhayisikili; nangona injini yaziva yomeleleka, i-turn-in yayiyi-skitish kwaye ibhayisikili yayibonakala inganakali.
Isantya sam iqela sasingumbane ngokukhawuleza, kodwa andizange ndilinde ikhefu ukuze ndibe nokumisa ukunqanda ukukhwela kunye nokukhwela ngakumbi ngokuzithemba.
Xa ekugqibeleni sigqityiweyo ukuya kwisidlo sakusasa sasemini, ndinechwephesha ye-Kawasaki yanciphisa izilungiso zangaphambili nangaphambili emva kokuchofoza. Ekunene kwi-bat, umehluko wawucacile; kunye nokuthobela ngakumbi, ibhayisikili yahlala kwiindawo ezinamaqatha ngaphandle kokukhathazeka, nto leyo eyakhuthaza ngakumbi ukuzithemba. I-Z1000 yayisichukumisekile kwaye ikulungele, nangona inike ithuba, ndingathanda ukuzama ukufumana izicwangciso zokumisa ukunqanda.
Ukuqinisekiswa ngokumisela okuxolelekileyo, ndaphinda ndinyuka kwiindawo zokugcina iinjineli, ndaza ndandimangaliswa kukunyuka kwe-7,000 rpm ukuya kwi-11,000 rpm. Nangona ulunge lombane we-midrange osebenzisekayo, umgca we-4 uyingqungquthela, kwaye ukukhawuleza kwamandla kuhamba kunye nokunyakaza okukhulu kunye nokumemeza okukhulu ngenxa yamadaka ngapha nangapha kwendlela yokuhamba emoyeni kwindlu egumbini ibhokisi lebhokisi.
Njengoko imini yayigqoke, i-Z1000 yayingqinela kwi-sportbike yonke into engayilindele. Kwakuyi-punchy, echaphazelekayo, kwaye ibenze ngakumbi kunokuba ibininzi ibonisa, ngeebhuleki eziye zafikelela ekuhambiseni isantya esibekwe yi-plantplant. Owe, kwaye ngaba ndithetha ukuba iyancibilikisa amathayi kunokuba iphumelele,?
NGOKUQINISWA: I-rocket ye-anti-crotch rocket
I-injection ye-Kawasaki yesimo sengqondo kwi-Z1000 iye yavelisa ibhayisiki ejolise ngakumbi, echaphazelekayo, kwaye ekugqibeleni iyonwabise ngaphezu kwayo. Kodwa ukuba ufuna umkhwele olula, i-Z1000 ayiyi kuba kuwe; Abaqhubi beemoto ezithuthuzelayo baya kuluqonda umda walo, kodwa abo bafuna ukucinga okungakumbi baya kufumana ukuphatha kwabo banomdla kwaye injini yayo inamandla kakhulu.
Nangona unikezela ukusebenza okugqithiseleyo ngokubanzi endleleni ngaphandle kwendlela (ngokungafani neendlela eziphezulu ezixhasayo ezifana ne-ZX-10R), i-Z1000 ayikwazi ukuthabatha izikhwama ze-saddlebags, ukuphelisa elinye iqela elithengiswa ngabathengi.
"Ndicinga ukuba le yi-bhisikiysi eya kuthatha ixesha elithile ukuba libone," kusho umphathi weCawasaki umphathiswa uKarl Edmondson. Kodwa ukuba abagibeli baseMerika bafumana ithuba kule bhayisikili ehamba ngeenqamle, baya kuvuzwa ngesithuthuthu esilungileyo esisebenza ngokugqithiseleyo njengendlela yokubhala.
Ixabiso: $ 10,499
Injini: ikhuphe i-Liquid, i-DOHC, i-valve eyi-16 1,043 ecwangcisiweyo-ezine
Isiphumo: 125 i-horse power, 81.1 lb-ft ye-torque
Ukuhanjiswa: Isikhululo sesithandathu
Ukumiswa kwangaphambili: 41mm Bonisa ifom ephihliweyo kunye nokulungelelanisa ukuchithwa kwamanzi, ukuchithwa kwamanzi kunye nokupakishwa kwentwasahlobo
I-Rake / trail: i-24.5 degrees / 4.1 intshi
Ukumiswa kokumva: I-monoshock ene-horizontal e-wtih ehlaziywayo yokulungiswa kwemvula kunye ne-spring preload
Iibhuleki zangaphambili: I-piston emine, i-radial-mount 300mm ipal
I-brake yangemuva: I-single-piston, ipini-slide caliper kunye ne-250mm ipalal disc
Umbane wamanzi: ii-4 gallons
Ukuphakama kwesihlalo: 32.1 intshi
Isisindo somrha: ama-481 iipounds
Imibala ekhoyo: i-Metallic Spark Black (kunye nesilivere) okanye i-Pearl Stardust White (nge-orange)
Ngubani omele athenge i-Kawasaki Z1000 ka-2010?
Abagibeli bezhenketho bafuna iinqanaba zokusebenza ezikufutshane-naphezu kwe-supersport ngaphandle kokuzibophezela okuzimeleyo kunye nemvelo ephezulu yokudlala kwezemidlalo.
I-Biography: Elon Musk
Umthandazo Wamandla Ngethuba Lokuzamazama komhlaba
Iinqununu zeZihlanu eziPhambili zeNgcaciso-mdlalo
Iingcaphuno Zothando Zengenalo Imfundiso Sifundise Ukuthandana Ngaphandle Koqhinga
I-Order Best Viewing ye-Star Wars Films
UPetros ulahla uYesu (Marko 14: 66-72)
Bazilimaza (Ukufa kukaDavid Gregory)
Indlela yokudibanisa isenzi esingaqhelekanga sesiFrentshi esithi 'Mourir' ('kuya kufa')
IYunivesiti yokuVunywa kweRishu
Imfazwe YaseMelika: Imfazwe yeSiqendu Inani elineshumi
Indlela yokuSebenzisa 'Ixhomekeke' kwiNgxoxo
UKayin Wamfumanaphi Umfazi Wakhe?
Iifilimu eziPhambili zeBabil Bunny